Judo: feno 60 taona ny klioba AS St Michel | NewsMada
Judo: feno 60 taona ny klioba AS St Michel
1960 – 2020. Hankalaza ny faha-60 taonany ny klioba AS St Michel Judo Amparibe. Tsy avelan’ireo mpikatroka amin’izao fotoana izao sy ireo zokibe nandalo tao amin’ny klioba handalo fotsiny izany fotoana izany fa tsy maintsy homarihina amin’ny fomba manetriketrika izany, mandritra ity taona ity. Hisy ihany koa ny politika vaovao, apetraky ny klioba St Michel dia ny fanomanana sy fanomezana sehatra ireo atleta mpandimby. Nambaran-dRasoanaivo Seth, anisan’ireo tompon’andraikitra mpikaraka fa klioba nanana ny maha izy azy, hatramin’izay ny St Michel. Porofon’izany, judoka-n’ny St Michel, izay vao “cadette” monja no nandrombaka medaly volamena, teo amin’ny “sénior”, nandritra ny lalaon’ny Nosy. Toy izany koa ny fifaninanana notanterahina tatsy La Réunion, ny herinandro lasa teo, mbola mpikatroka “cadet” ihany koa ny tonga teo amin’ny famaranana, ho an’ny “senior”, ihany.
Nahavita be ny klioba
Ankehitriny, manana mpikatroka miisa 150 mianadahy, ny St Michel ary misy mpanabe manana ny fehikibo mainty 50. Manana ireo “maître” ambony grade indrindra miisa telo ihany koa. Efa betsaka ireo anaram-boninahitra azon’ny St Michel na teto an-tanindrazana na ny tany ivelany.
Maro ireo hetsika hankalazana ity faha-60 taona ity, izay hatomboka amin’ny fotoam-pivavahana, ny asabotsy 14 marsa, arahin’ny fampirantiana. Ankoatra izay, hisy ireo fifaninanana samy hafa toy ny “warrior games” na mitovitovy amin’ny “parcours de combatant”, ataon’ny miaramila, hotontosaina ny 25 avrily. Ny 23 mey ny fetin’ny kolejy, hisian’ny fifaninanana ho an’ny sokajy zandriny ary any amin’ny volana septambra ny “Tsukinami Shiai Elite et Master”, na ady ka izay resy avy hatrany dia miala. Hofaranana amin’ny hetsika ara-java-kanto sy alim-pandihizana ny fankalazana ny 31 oktobra, ho avy izao.